Gacan-gashiyada Shiinaha ee Fadhiga ah ee loo yaqaan 'Spandex' (jeermiska dila bakteeriyada / dila fayraska) soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. 3L Tex
Waxyaabaha: Lacag saafi ah oo lagu dahaadhay Nylon Spandex
Heerka Waxqabadka fayraska: 99.9%
Waxtarka gaashaan: 50.0dB-71.0dB
Gacan-gashiyada Polyamide ee Dahaarka ah ee Dahaarka leh leh Spandex
Magaca Badeecada: galoofyada qalinka ah ee loo yaqaan 'Spandex' (jeermiska dila bakteeriyada / dila)
Qaybta #: KS100S-G
Waxyaabaha: Nadiifadda Nylon Spandex ee Dahabka Dahaarka ah
Sharax Gaaban: Qeybta hoose ee 'Covid 19', waa ku guuleyste dadku inay is ilaashadaan iyagoo xiranaya jeermiska jeermiska maaskaro wajiga iyo galoofyada.
- Silver waa kaaliyaha ugu wanaagsan ee ku shaqeynta ugu fiican marka loo eego biraha kale
- Bakteeriyada lidka ku ah: waxay xaddidi kartaa 99.99% staphylococcus dahab ah, klebsiella pneumoniae, HIN1
- Dib-u-isticmaali karo & la dhaqi karo: waa la dhaqi karaa in ka badan 100 jeer
- Jilicsan oo raaxo leh
- Fashion iyo dhalaalaya
Noocyada Bakteeriyada ka hortagga: fayrasyada uu ku dhaco mareenka neefsashada - Covid-19, H1N1, Flu, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform iwm.
Mabaadi'da: Dharka qalinka ah wuxuu soo daayaa ion lacag ah kaas oo ka qaadi doona borotiinka enzyme dusha sare ee bakteeriyada iyo nooleyaasha kale, taas oo markaa burburinaysa qaab-dhismeedka bakteeriyada, taasoo saameyn ku yeelanaysa jiritaankeeda, iyo gaaritaanka ujeeddada ka-hortagga bakteeriyada. % fayraska uu ku dhaco mareenka mareenka neefta, Covid-19, H1N1, hargabka daqiiqado gudahood.
Natiijada baaritaanka ee ka timid Machadka Microbiology iyo Epidemiology ee Akadeemiyada Cilmiga Caafimaadka ee Milatariga ayaa muujineysa in dharka ka hortaga fayrasku uu dili karo ama xakamayn karo hargabka A iyo hargabka waqti yar.
SGS natiijada baaritaanka bakteeriyada:
Kala duwanaanta soo noqnoqoshada iyo waxtarka gaashaanka:
Baaxadda Joogtada: 9KHz-40GHz
Waxtarka gaashaanka: 50.0dB-71.0dB
Mowjadda ka hortagga korantada-korantada / EMF gaashaanka:
Lacagta ayaa si aad ah u dhaqmeysa waxayna leedahay shaqo gaashaaman koronto. Marka dadku xirtaan dharka / dharka / dharka / qalabka ka hortagga elektromagnetic-ka si ay ula xiriiraan qalabka elektaroonigga ah, dharka mowjadda ka hortagga elektromagnetic wuxuu si dhaqso leh oo wax ku ool ah u sameyn karaa hirarka elektromagnetic-ka, taasoo markaa ka ilaalinaysa jirka mowjadaha elektromagnetic-ka.
Gacan-gashiyada antiviral-ka ee dhaq-dhaqaaqa badan ayaa qaatay tiknoolajiyada nano-antiviral-ka ee BCNT, taas oo si wax ku ool ah u dili karta ama u joojin karta waxqabadka bakteeriyada iyo fayrasyada.
Sida UK, Chile iwm waddanku wuxuu lahaa shirkad soo saartay maaskaro 3D maaskarada / galoofyada anti-bakteeriyada, si kastaba ha noqotee, lacagta ayaa ka fiican tan naxaasta.
Saameynta Silvers: 5 daqiiqo markii la soo bandhigayay, sunta sarS coronavirus ee unugyada VERO ayaa loo yareeyay heer aad u hooseeya, iyo 20 daqiiqo, wax saameyn sun ah lama helin.
Maaddaama ay tahay qalabka ugu wanaagsan, qalinku wuxuu qabtay waxqabadka ugu wanaagsan marka loo eego biraha kale.
Si fiican u dooro EMI / RFI Shielding, Anti-Static, Electrically Conductive, Galoofyada anti-microbial
Hore: Maaskaro Silver (jeermis dilaa / dilaa fayras)
Xiga: Gacan-gashiyada Silver (jeermiska dila bakteeriyada / dila)